JABUUTI oo xabsi sanado ah ku xukuntay WASIIRO iyo mas'uuliyiin kale oo sare - Caasimada Online
Home Warar JABUUTI oo xabsi sanado ah ku xukuntay WASIIRO iyo mas’uuliyiin kale oo...
JABUUTI oo xabsi sanado ah ku xukuntay WASIIRO iyo mas’uuliyiin kale oo sare
Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda sare ee dalka Jabuuti ayaa shalay xabsi sanado ah ku xukuntay mas’uuliyiin xilal sare ka hayay dowladda Jabuuti, kuwaasi oo lagu soo eedeeyay masuq-maasuq, caburin, iyo in ay baahiyeen documentiyo iyo cod sir ah oo ay ku sheekeysteen Ismaaciil Cumar Geelle iyo taliyeyaasha ciidamada.
Mas’uuliyiinta la xukumay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii maaliyada Jabuuti Boode Axmed Boodhe oo lagu xukumay shan sano iyo lix bilood oo xabsi ah, kaasi oo lagu soo eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne.
Waxaa kaloo saddex sano oo xabsi ah lagu xukumay Cabdullaahi Cabdi Farah, Taliyihii ciidanka Booliska Jabuuti, si weyna u aaminsanaa Ismaaciil Cumar Geelle, taliyaha ayaa horay dadka u caburin jiray dadka kasoo horjeeda Ismaaciil Cumar Geelle.
Cabdalla Xasan Iltireh oo ahaa Agaasimihii Bankiga Dhexe ee Jabuuti ayaa isna lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah, waxaana lagu eedeeyey isla kiiska Wasiirka maaliyada oo ah xatooyo xoolo dadweyne.
Sidoo kale, Yabeh Siciid Gueldoon iyo Ibraahim Cabdi Geelle ayaa lagu helay in waraaqo sir ah iyo codad lays dhaafsaday ayna dhageysteen telefoon banaankana u saareen wada hadalladii Ismaaciil Cumar Geelle iyo Taliyayaashiisa ciidamada ay kuwada hadlayeen, waxaana maxkamaddu ay ku riday xukun.
Dhamaan mas’uuliyiintaasi ayaa waxay xukunkooda ku dhameysan doonaan xabsiga Gabood, oo ah midka si weyn loo ilaaliyo.
Mas’uuliyiintaasi ayaa xukunkooda loo arkaa mid siyaasadeysan maadaama madaxweynaha Jabuuti uusan jecleysan xubnahaasi oo qaarkood lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen afgambi fashilmay oo taliyeyaal ciidan ay abaabuleen, balse qorshahaasi uu ahaa mid siyaasadeysnaa oo lagu kala dilayay madaxweynaha iyo xubno xukuumadda iyo ciidamada ka tirsanaa.